Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » 65% amin'ireo mpandeha fiaramanidina amerikana no manohana ny pasipaoro vaksinina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
65% amin'ireo mpandeha fiaramanidina no manohana ny pasipaoro fanaovana vaksiny
Raha nanapa-kevitra ny FAA fa hanao fandaharanasa momba ny pasipaoro vaksinina, dia mpandeha iray amin'ny 10 no tsy mahazo miditra ao anaty fiaramanidina.
44% amin'ny Repoblikana no nilaza fa hanohana ny fitakian'ny governemanta hanome porofon'ny fanaovana vaksiny mba hahafahany manidina.
48% an'ny Repoblikana koa dia hanohana mandat mivantana amin'ireo kaompaniam-piaramanidina.
95% n'ny Demokraty no hanohana ny fitakiana pasipaoro fanaovana vaksinin'ny zotram-piaramanidina.
Rehefa miakatra ny delta variant dia efa ho 65% ny flyer matetika no mitatitra fa ny pasipaoro fanaovana vaksinina dia hampitombo ny fahatokisan'izy ireo ny fiarovana ny dia an'habakabaka, araka ny tatitra vaovao iray. Raha 90% -n'ny flyer matetika na vaksinina feno na amin'ny ampahany ny viriosy, dia saika iray amin'ny 10 flyer matetika no mandà ny hanaovana vaksiny.
Mampahery ireo isa ireo satria ny flyer matetika dia misy vaksiny avo lenta. Na izany aza, raha nanapa-kevitra ny FAA hampihatra a programa pasipaoro vaksinina, efa ho iray amin'ny mpandeha 10 no voarara tsy hiditra amin'ny fiaramanidina.
Ny fanadihadiana dia natao tamin'ny alàlan'ny Frequent Flyer Database, izay ahitàna maherin'ny 200,000 mpandeha matetika opt-in manerana an'i Etazonia. Manakaiky ny 65% ​​mpandray anjara amin'ny fanadihadiana dia mihoatra ny 60 taona, mametraka azy ireo amin'ny sokajy mety atahorana ho an'ny aretina mafy avy amin'ny COVID-19.
Ny indostrian'ny fizahan-tany dia iray amin'ireo voa mafy indrindra nandritra ny areti-mandringana, niaraka tamin'ny famerana ny teritery sy ny fizahan-tany mba hijanona. Niadana ny fanarenana. Tamin'ny fanadihadiana matetika momba ny Flyer matetika, 2020% amin'ireo namaly dia nilaza fa manana tetika hitetezana izy ireo mandritra ny enim-bolana ho avy. Na izany aza, tamin'ny tatitra tamin'ity taona ity, 60% amin'ireo namaly no nilaza fa mbola tsy nanao dia lavitra hatramin'ny Janoary 36.
Saingy mitombo ny filan'ny fivezivezena. Manakaiky ny 70% ny valinteny dia nilaza fa manana drafitra hivezivezena amin'ny fiaramanidina izy mandritra ny enim-bolana ho avy, ka ny 72% amin'ireo mpandeha dia mikasa ny hanao dia manokana.